Fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny lesoka CHECKDB "Ny pejin'ny Allocation Index (IAM) dia nanondro ny pejy IAM manaraka"
Home Products DataNumen SQL Recovery Lesoka CHECKDB: Ny pejy Sarintany fizarana Index (IAM) dia notondroin'ny mpanondro manaraka ny pejy IAM
Fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny hadisoan'ny CheckDB "Ny pejin-tsarintany fizarana Index (IAM) dia notondroin'ny mpanondro manaraka ny pejy IAM"
Rehefa mampiasa DBCC CHECKDB amin'ny REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS masontsivana hanamboarana angon-drakitra maloto .MDF, toy izao:
hitanao izao hafatra diso izao:
Msg 8921, haavo 16, fanjakana 1, andalana 8
Tapitra ny fizahana. Nahitana tsy fahombiazana raha nanangona ny zava-misy. Mety hoe tsy mifanaraka amin'ny habaka na latabatra amin'ny rafitra ny tempdb. Zahao ireo lesoka teo aloha.
Msg 8998, haavo 16, fanjakana 2, andalana 8
Ny lesoka amin'ny pejy ao amin'ny pejy GAM, SGAM, na PFS dia manakana ny fizahana ny fahamendrehana amin'ny fizarana ID pejy 39 manomboka amin'ny (1: 0) ka hatramin'ny (1: 8087). Jereo ny lesoka hafa noho ny antony.
Hitan'ny CHECKDB ny lesoka 1 ary ny lesoka 0 tsy mifanaraka amin'ny zavatra tokana.
Msg 2575, haavo 16, fanjakana 1, andalana 8
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 157) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 3, ID ID 1, ID fizarazarana 196608, zara ID 196608 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Tsy afaka nanamboatra ity lesoka ity.
Nahita lesoka fizarana 1 sy lesoka tsy fitoviana 0 tao amin'ny latabatra 'sys.sysrscols' (object ID 3) ny CHECKDB.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 131) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 5, ID ID 1, ID fizarazarana 327680, zara ID 327680 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Nahita lesoka fizarana 1 sy lesoka tsy fitoviana 0 tao amin'ny table 'sys.sysrowsets' (ID ID 5) ny CHECKDB.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 21) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 7, ID ID 1, ID fizarazarana 458752, zara ID 458752 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Ny fanamboarana ity lesoka ity dia mila hadisoana hafa ahitsy aloha.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 18) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 7, ID ID 2, ID fizarazarana 562949953880064, zara ID 562949953880064 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Nahita lesoka fizarana 2 sy lesoka tsy fitoviana 0 tao amin'ny tabilao 'sys.sysallocunits' (ID ID 7) ny CHECKDB.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 12) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 8, ID ID 0, ID fizarazarana 524288, zara ID 524288 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Nahita lesoka fizarana 1 sy lesoka tsy fitoviana 0 tao amin'ny latabatra 'sys.sysfiles1' (ID ID 8) ny CHECKDB.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 137) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 20, ID ID 1, ID fizarazarana 281474978021376, zara ID 281474978021376 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Nahita lesoka 1 tamin'ny fizarana 0 ary lesoka tsy fitoviana XNUMX tao amin'ny table 'sys.sysdbfiles '(object ID 20).
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 152) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 23, ID ID 1, ID fizarazarana 281474978217984, zara ID 281474978217984 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Nahita lesoka fizarana 1 sy lesoka tsy fitoviana 0 tao amin'ny tabilao 'sys.sysphfg' (ID ID 23) ny CHECKDB.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 154) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 24, ID ID 1, ID fizarazarana 281474978283520, zara ID 281474978283520 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Nahita lesoka fizarana 1 sy lesoka tsy fitoviana 0 tao amin'ny table 'sys.sysprufiles' (ID ID 24) ny CHECKDB.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 92) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 27, ID ID 1, ID fizarazarana 281474978480128, zara ID 281474978480128 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 288) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 27, ID ID 2, ID fizarazarana 562949955190784, zara ID 562949955190784 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 96) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 27, ID ID 3, ID fizarazarana 844424931901440, zara ID 844424931901440 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Nahita lesoka 3 tamin'ny fizarana 0 sy 27 lesoka tsy fitoviana tao amin'ny latabatra 'sys.sysowners' (object ID XNUMX) ny CHECKDB.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 102) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 29, ID ID 1, ID fizarazarana 281474978611200, zara ID 281474978611200 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Nahita lesoka fizarana 1 sy lesoka tsy fitoviana 0 tao amin'ny latabatra 'sys.sysprivs' (ID ID 29) ny CHECKDB.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 117) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 34, ID ID 1, ID fizarazarana 281474978938880, zara ID 281474978938880 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 295) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 34, ID ID 2, ID fizarazarana 562949955649536, zara ID 562949955649536 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 368) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 34, ID ID 3, ID fizarazarana 844424932360192, zara ID 844424932360192 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 123) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 34, ID ID 4, ID fizarazarana 1125899909070848, zara ID 1125899909070848 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Hitan'ny CHECKDB lesoka 4 sy lesoka tsy fitoviana 0 amin'ny latabatra 'sys.sysschobjs' (ID ID 34).
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 108) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 41, ID ID 1, ID fizarazarana 281474979397632, zara ID 281474979397632 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 245) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 41, ID ID 2, ID fizarazarana 562949956108288, zara ID 562949956108288 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Nahita lesoka fizarana 2 sy lesoka 0 tsy tapaka tamin'ny lisitra 'sys.syscolpars' (object ID 41) ny CHECKDB.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 10) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 44, ID ID 1, ID fizarazarana 281474979594240, zara ID 281474979594240 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 286) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 44, ID ID 2, ID fizarazarana 562949956304896, zara ID 562949956304896 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Nahita lesoka fizarana 2 sy lesoka tsy fitoviana 0 tao amin'ny tabilao 'sys.sysnsobjs' (object ID 44) ny CHECKDB.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 76) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 50, ID ID 1, ID fizarazarana 281474979987456, zara ID 281474979987456 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 292) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 50, ID ID 2, ID fizarazarana 562949956698112, zara ID 562949956698112 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 294) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 50, ID ID 3, ID fizarazarana 844424933408768, zara ID 844424933408768 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Hitan'ny CHECKDB lesoka 3 sy lesoka tsy fitoviana 0 amin'ny latabatra 'sys.sysscalartypes' (object ID 50).
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 125) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 54, ID ID 1, ID fizarazarana 281474980249600, zara ID 281474980249600 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 284) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 54, ID ID 2, ID fizarazarana 562949956960256, zara ID 562949956960256 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Nahita lesoka fizarana 2 sy lesoka tsy fitoviana 0 tao amin'ny tabilao 'sys.sysidxstats' (object ID 54) ny CHECKDB.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 141) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 55, ID ID 1, ID fizarazarana 281474980315136, zara ID 281474980315136 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 55) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 55, ID ID 2, ID fizarazarana 562949957025792, zara ID 562949957025792 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Nahita lesoka fizarana 2 sy lesoka tsy fitoviana 0 tao amin'ny latabatra 'sys.sysiscols' (object ID 55) ny CHECKDB.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 13) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 58, ID ID 1, ID fizarazarana 281474980511744, zara ID 72057594037993472 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 84) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 58, ID ID 2, ID fizarazarana 562949957222400, zara ID 72057594038059008 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Nahita lesoka fizarana 2 sy lesoka tsy fitoviana 0 tao amin'ny tabilao 'sys.sysbinobjs' (object ID 58) ny CHECKDB.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 129) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 60, ID ID 1, ID fizarazarana 281474980642816, zara ID 281474980642816 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1:45) dia tondroin'ny pejy manaraka ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 60, ID ID 1, fizarana ID 281474980642816, fizarana ID 71776119065149440 (karazana data LOB) , saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Hitan'ny CHECKDB ny lesoka 2 ary ny lesoka 0 tsy fitovizany eo amin'ny latabatra 'sys.sysobjvalues' (object ID 60).
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 88) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 64, ID ID 1, ID fizarazarana 281474980904960, zara ID 281474980904960 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 243) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 64, ID ID 2, ID fizarazarana 562949957615616, zara ID 562949957615616 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Nahita lesoka fizarana 2 sy lesoka tsy fitoviana 0 tao amin'ny tabilao 'sys.sysclsobjs' (object ID 64) ny CHECKDB.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 15) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 69, ID ID 1, ID fizarazarana 281474981232640, zara ID 72057594039697408 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 39) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 69, ID ID 2, ID fizarazarana 562949957943296, zara ID 72057594039762944 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 290) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 69, ID ID 3, ID fizarazarana 844424934653952, zara ID 72057594039828480 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Hitan'ny CHECKDB lesoka 3 sy lesoka tsy fitoviana 0 amin'ny latabatra 'sys.sysrts' (object ID 69).
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 98) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 74, ID ID 1, ID fizarazarana 281474981560320, zara ID 281474981560320 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 100) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 74, ID ID 2, ID fizarazarana 562949958270976, zara ID 562949958270976 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Nahita lesoka fizarana 2 sy lesoka tsy fitoviana 0 tao amin'ny latabatra 'sys.syssingleobjrefs' (object ID 74) ny CHECKDB.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 104) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 75, ID ID 1, ID fizarazarana 281474981625856, zara ID 281474981625856 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 106) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 75, ID ID 2, ID fizarazarana 562949958336512, zara ID 562949958336512 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Nahita lesoka fizarana 2 sy lesoka tsy fitoviana 0 tao amin'ny tabilao 'sys.sysmultiobjrefs' (object ID 75) ny CHECKDB.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 33) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 90, ID ID 1, ID fizarazarana 281474982608896, zara ID 72057594038583296 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 81) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 90, ID ID 2, ID fizarazarana 562949959319552, zara ID 72057594038648832 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Nahita lesoka fizarana 2 sy lesoka tsy fitoviana 0 tao amin'ny table 'sys.sysqnames' (ID ID 90) ny CHECKDB.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 49) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 91, ID ID 1, ID fizarazarana 281474982674432, zara ID 72057594038779904 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 35) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 91, ID ID 2, ID fizarazarana 562949959385088, zara ID 72057594038845440 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Nahita lesoka fizarana 2 sy lesoka tsy fitoviana 0 tao amin'ny tabilao 'sys.sysxmlcomponent' (object ID 91) ny CHECKDB.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 83) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 92, ID ID 1, ID fizarazarana 281474982739968, zara ID 72057594038976512 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Nahita lesoka fizarana 1 sy lesoka tsy fitoviana 0 tao amin'ny tabilao 'sys.sysxmlfacet' (object ID 92) ny CHECKDB.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 130) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 93, ID ID 1, ID fizarazarana 281474982805504, zara ID 72057594039107584 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 22) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 93, ID ID 2, ID fizarazarana 562949959516160, zara ID 72057594039173120 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Nahita lesoka fizarana 2 sy lesoka tsy fitoviana 0 tao amin'ny latabatra 'sys.sysxmlplacement' (object ID 93) ny CHECKDB.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 114) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 97, ID ID 1, ID fizarazarana 281474983067648, zara ID 72057594038190080 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 134) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 97, ID ID 2, ID fizarazarana 562949959778304, zara ID 72057594038255616 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Nahita lesoka fizarana 2 sy lesoka tsy fitoviana 0 tao amin'ny tabilao 'sys.sysbinsubobjs' (object ID 97) ny CHECKDB.
Msg 8939, haavo 16, fanjakana 98, andalana 8
Hadisoana amin'ny latabatra: ID ID 99, ID ID 0, ID fizarazarana 0, fizarana ID 6488064 (karazana data Data fizarana), pejy (57311: 268369920). Tsy nahomby ny fitsapana (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Ny sanda dia 2057 sy -4.
Hitan'ny CHECKDB lesoka 5 sy lesoka 28 tsy mitaha amin'ny tabilao '(Object ID 99)' (ID ID 99).
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 120) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 245575913, ID ID 0, ID fizarazarana 72057594040549376, zara ID 72057594045792256 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1:118) dia tondroin'ny pejy manaraka ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 245575913, ID ID 0, fizarana ID 72057594040549376, fizarana ID 72057594045857792 (karazana data LOB) , saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) (1: 126) dia tondroin'ny pejy manaraka an'ny pejy IAM (0: 0) ao amin'ny ID ID 245575913, ID ID 2, ID fizarazarana 72057594040614912, zara ID 72057594045923328 (karazana In-row data), saingy tsy hita izany tamin'ny scanner.
Nahita lesoka fizarana 3 sy lesoka tsy fitoviana tao amin'ny latabatra 'TestTable' (ID ID 0) ny CHECKDB.
Nahita lesoka fizarana 58 sy lesoka tsy fitoviana 28 tao amin'ny database 'xxxx' i CHECKDB.
izay 'xxxx' no anaran'ny tahiry MDF maloto manamboatra.
Ity dia lesoka fizarana satria misy ny olana amin'ireo pejy IAM, mifanaraka amin'izany Msg 2575 fahadisoana.
Pikantsary hafatra diso:
Ny tahirin-kevitra ao amin'ny rakitra MDF dia voatahiry ho pejy, ny pejy tsirairay dia 8KB. Ny pejin'ny Index Allocation Map (IAM) dia ampiasaina hanokanana ireo pejy ao amin'ny MDF File, ary ampifandraisina ho lisitra izy ireo.
Raha hitan'ny kaomandy DBCC CHECKDB fa tsy mety ny lisitry ny pejy IAM ary tsy afaka manitsy ny olana izy dia hitatitra ity lesoka ity.
Azonao atao ny mampiasa ny vokatray DataNumen SQL Recovery hamerenana ny angona avy amin'ny rakitra MDF maloto ary hamaha ity lesoka ity.
Ohatra ny rakitra MDF simba izay hiteraka ny Msg 2575 lesoka:
SQL Server Malagasy Bible Fisie MDF maloto Rakitra MDF namboarin'i DataNumen SQL Recovery